I-Río Tinto: izici, imvelaphi, imisebenzi kanye nokungcola | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngomunye wemifula ethakazelisa kakhulu kuyo yonke iNhlonhlo Yase-Iberia. Imayelana ne- Umfula iTinto. Itholakala igeza amanzi ayo phakathi nohambo lwamakhilomitha ayi-100 kuze kufike emlonyeni wayo esifundazweni saseHuelva. Ithola igama layo ngenxa yombala wemvelo wamanzi ayo. Leli qiniso liyenza ibe ngomunye wemifula eyaziwa kakhulu emhlabeni.
Kule ndatshana sizokutshela zonke izici, imvelaphi nemisebenzi yezomnotho, kanye nokubaluleka komfula iTinto.
2 Imisebenzi yezomnotho yomfula iTinto
3 Incazelo eningiliziwe yomfula iTinto
UMfula iTinto waziwa kakhulu emhlabeni wonke njengoba umele enye yezindawo zakudala zezimayini ezisezimbalini. Obunye bobufakazi obutholwe ngabaphenyi buveza ukuthi besekuvele kukhona okwenziwayo ezimayini ezifana ukuxhashazwa nokuncibilikisa ithusi kusukela ngo-3.000 BC Umthombo walo mfula uqala eSierra de Huelva. Ngokuqondile, itholakala eSierra de Padre Caro etholakala kumasipala waseNerva. Inomzila cishe wamakhilomitha ayi-100 futhi umlomo wayo usesimweni somfula owakhiwa umfula i-Odiel. Ngale ndlela, iphelela eGulf of Cádiz esemngceleni wedolobha laseHuelva.
Kuwo wonke uhambo lwayo lidlula kumasipala waseMinas de Río Tinto, bese lidlulela e-El Campillo. Lapho le ndawo yonke isidlulile, uthola kuze kufike kuZalamea la Real neBerrocal. Iqhubeka nendlela yayo ebheke eningizimu futhi idlula komasipala baseValverde del Camino, ePaterna del Campo, eNiebla naseLa Palma del Condado. Ekugcineni, badlula komunye omasipala baze bafike ekugcineni edolobheni laseHuelva.
Imisebenzi yezomnotho yomfula iTinto
Lo mfula waziwa umhlaba wonke ngenxa yemisebenzi ebalulekile yezimayini eyenzeka lapho. Yonke le misebenzi ibaluleke kakhulu ekuthuthukiseni umnotho wesifunda. Njengoba umfula ungehlukaniswa nezimayini, kwasungulwa iRío Tinto Mining Park. Le paki inenhloso yabavakashi futhi isebenza ukufundisa izivakashi wonke umlando nomsebenzi obalulekile wezimayini owenzeka lapho. Ngale ndlela, awugcini nje ngokufunda ngomlando nezindaba zamanje, kepha futhi ungakujabulela njengomndeni.
Kunemizila ethile efana nePeña del Hierro, okuyimayini enezindawo zemibukiso yamaRoma ongayivakashela, inqobo nje uma uzohambisana nemihlahlandlela. Kukhona nezinye izindawo ezinokuheha izivakashi njengeMining Museum. Nanka amanye amakamelo ayi-15 lapho kuchazwa konke okwenzekile kuwo wonke umlando woMfula iTinto. Sesha khombisa ezinye izingcezu zemivubukulo, insimbi, imboni yezitimela nezimayini.
Eminye imisebenzi yokuzijabulisa engaletha ingcebo ethe xaxa kula mazwe yenziwa endaweni yamaNgisi. Ngalesi sizathu, abaqondisi beRiotinto Company Limited bakwazile ukufaka okufana nale ndawo yaseNgilandi. Isibonelo, ayilethanga kuphela ukuchuma kwezomnotho, kepha enye yendlela yokuphila yamaNgisi. Sibona izinkundla zegalofu, ukuzijwayeza ibhola lezinyawo nokuhlelwa kwama-boycouts.
Incazelo eningiliziwe yomfula iTinto
Sizokwenza incazelo eningiliziwe yalo mfula. Siyazi ukuthi ingamakhilomitha ayi-100 ubude futhi ithola amanzi avela ezingxenyeni zeminye imifula eSierra de Huelva. Phakathi kwemifula enokugeleza okuphezulu kunalena elandelayo: INicoba, iCasa de Valverde, iJarrama, iCorumbel, iDomingo Rubio neCandón.
Siyazi ukuthi uMfula iTinto unezimpawu zamanzi ezihlukile ezithathwe kubume bawo bokuma komhlaba. Umbala wayo ungenxa yediphozi yensimbi neyethusi etholakala eceleni komfula. Lezi zibeka amachweba e-acidophilic emanzini aphethe ama-oxidizing sulfide ukuze asinde. Ngale ndlela, ngalokhu ukukhishwa kwama-proton emanzini okwandisa i-pH yomfula futhi kuyenze ibe nesiteshi se-asidi.
Isikhalazo sesayensi lo mfula onaso emlandweni wonke sivela ku-pH waso kanye nobukhona obukhulu bezinsimbi ezisindayo kanye ne-oxygenation encane. Lesi sibalo sezici senza kube uhlelo lokuphila oluyingqayizivele kuyo yonke iplanethi. Iqiniso lokutadisha imvelo eyingqayizivele eplanethi lifisa ukwazi kakhulu ososayensi futhi liyabanaka. Futhi ukuthi umfula iTinto uyindawo yokuhlala eyeqisayo etholakala ekuveleni kwezinto ezincane ezingadingi inani elikhulu lomoya-mpilo noma ilanga ukuze uphile. Ngale ndlela, bakwazile ukuzivumelanisa nokudla ngamaminerali. Lezi zidalwa ziphiwe ngu ukuziphendukela kwemvelo futhi kufaka amabhaktheriya, isikhunta nolwelwe oluthile lwendawo.
Esinye sezidalwa esibe nentshisekelo ekhethekile ekutadisheni lo mfula kube yiNASA. Imininingwane evela kokunye ukuhlola icabanga ukuthi, uma kutholakala amanzi angamanzi ku-Mars, kungaba nezindawo ezithile ezifana noMfula iTinto osebenzela ukusinda. Yize inombala obomvu kakhudlwana futhi ine-asidi ephezulu, amanzi awanabungozi ukuwathinta. Kunemifula lapho kungathintwa khona amanzi ngaphandle kokulimaza, yize ukusetshenziswa kwawo kuphikiswa ngenxa yobukhona bezinsimbi ezisindayo.
Naphezu kwezici ezihlukile zalo mfula, awusindiswa ekungcolisweni kwabantu. Yize kunamazinga emvelo okungcoliswa ngenxa yobukhona bezinto ezisindayo ezihlukaniswe emanzini, kungezwa umthelela owenziwe yimisebenzi yabantu. Ukukhishwa kwamanzi ezimboni ezimbonini zodayi ngaphandle kokwelashwa kumasipala waseNerva Bafuna ukuthi icala labo lingabonakali njengoba la manzi enombala ofana nowamanzi omfula.
Kumele kukhunjulwe ukuthi lo mfula ukhethekile futhi uhlukile futhi ungaba nobuthakathaka obuphakeme kubhalansi wamakhemikhali we-ecosystem. Njengoba ukwazi ukubona, ngisho nangokwemvelo okwehlukile emhlabeni wonke umuntu akhethe intshisekelo yezomnotho kunesayensi.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngomfula iTinto kanye nezimpawu zawo ezikhethekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » I-Rio Tinto
ULorenzo Garcia Rillo kusho
Ubukhulu bemvelo esingabazi. Siyakuhalalisela futhi siyabonga ngokusenza sicabange ngokungazi amasiko okusenze sazibophezela.
Phendula uLorenzo García Rillo